Ndị ọka iwu na-ahụ maka mba ụwa na Netherlands - Law & More
Onye ọka iwu na-ahụ maka njikwa
Onye ọka iwu ịrịọ
Enwe ọka iwu enweghị ego
Onye ọka iwu nkwekọrịta
Tgwọ lectchịkọta ọka iwu
Onye ọka iwu na-ewe n'ọrụ
Onye ọka iwu ezinụlọ
Onye ọka iwu ICT
Onye nwere ọgụgụ isi (IP) onye ọka iwu
Onye ọka iwu Media
Mergers & Nnweta
Iwu ezumike nka
Ntọala Philanthropy & Charity
Onye ọka iwu nzuzo
Onye ọka iwu ụlọ
Onye ọka iwu ụtụ
Eurasia & CIS oche
Pharma & Life sayensị
Ndị otu Dutch Dutch Bar Association
Njikọ Iwu Worldwa
Ihe ndị bara uru
Ndebanye aha Mpaghara Aha
GKWUO G THE N'THELỌ NCHE?
Oku N'IKWU Iwu
Iwu nchịkwa na-ekwu banyere ikike na ọrụ nke ụmụ amaala na azụmaahịa ndị gọọmentị. Mana iwu nhazi na-ahazikwa otu gọọmentị si eme mkpebi yana ihe ị nwere ike ime ma ọ bụrụ na ị kwenyeghị na mkpebi dị otú ahụ. Mkpebi gọọmentị bụ isi na iwu nchịkwa. Mkpebi ndị a nwere ike ịbara gị uru dị ukwuu. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ka ị mee ihe ozugbo ma ọ bụrụ na ị kwenyeghị mkpebi gọọmentị nke nwere nsonaazụ ọ ga-ewetara gị. Dịka ọmụmaatụ: a ga-ewepụ ikike gị ma ọ bụ mee ihe mmanye iwu megide gị. Ndị a bụ ọnọdụ ị nwere ike ịjụ. O doro anya na enwere ike ịjụ nkwenye gị. I nwekwara ikike itinye akwụkwọ ịrịọ arịrịọ & megide ịjụ nkwenye gị. Enwere ike ịme nke a site na itinye akwụkwọ mkpesa. Ndị ọkàiwu na-ahazi ya Law & More nwere ike nye gị ndụmọdụ ma kwado gị na usoro a.
Iwu Iwu Nchịkwa Izugbe
Iwu Iwu Nchịkwa (Awb) na-abụkarị usoro iwu maka ọtụtụ okwu gbasara iwu nchịkwa. Iwu Iwu Nchịkwa (Awb) depụtara etu gọọmentị ga-esi kwadebe mkpebi, iwu mbipụta yana mmachi dị maka mmanye.
Ndị ọka iwu anyị dị njikere maka gị
Ndị ọka iwu ụlọ ọrụ
Onye ọka iwu
"Achọrọ m inwe onye ọka iwu nke dị njikere maka m oge niile, ọbụlagodi na ngwụsị izu"
Ikike I nwere ike ịbịakwute iwu nhazi ma ọ bụrụ na ịchọrọ ikikere. Nke a nwere ike ịbụ, dịka ọmụmaatụ, ikike maka gburugburu ebe obibi ma ọ bụ ihe ọ liụ liụ mmanya na ọbịa. Na omume, ọ na - eme mgbe niile na ajụrụ ngwa maka ikike. Mụ amaala nwere ike jụ. Mkpebi ndị a na ikike bụ mkpebi ikpe. Mgbe ị na-eme mkpebi, gọọmentị na-agbakwunye iwu ndị metụtara ọdịnaya na ụzọ esi eme mkpebi ahụ. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịnwe enyemaka nke ọka iwu ma ọ bụrụ na ị jụ ịjụ akwụkwọ ikike gị. N'ihi na a na-edozi iwu ndị a dabere na iwu iwu metụtara iwu nchịkwa. Site na itinye ọka iwu, ịnwere ike ijide n'aka na usoro a ga-aga n'ihu nke ọma ma ọ bụrụ na ekwenyeghị yana nke mkpegharị.
N'ọnọdụ ụfọdụ, ọ gaghị ekwe omume itinye akwụkwọ mgbochi. N'ime usoro ọ ga-abụ ihe atụ iji nyefee echiche mgbe emechara mkpebi. Uche bụ nzaghachi nke gị, dị ka onye nwere mmasị, nwere ike izigara onye ikike tozuru etozu na nzaghachi maka mkpebi ịmepụtara. Ndị ikike nwere ike iburu n'uche echiche nke ekwuputara mgbe a ga-eme mkpebi ikpeazụ. Ya mere, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịchọrọ ndụmọdụ gbasara iwu tupu ị tinye echiche gị maka mkpebi ịmepụtara. Nkwenye Enyemaka inye onyinye pụtara na inwere ike ịnwe ego site n'aka ndị na-ahụ maka ọrụ maka ebumnuche nke itinye ego n'ọrụ ụfọdụ. Inye enyemaka mgbe niile nwere ihe ndabere iwu. Na mgbakwunye n'itinye iwu, enyemaka bụ ngwa ọrụ gọọmentị na-eji. N’ụzọ dị otu a, gọọmentị na-akpali omume ọma. Enyemaka na-abụkarị n'okpuru ọnọdụ. Ọnọdụ ndị a gọọmentị nwere ike ịlele iji hụ ma ha na-emezu. Ọtụtụ ụlọ ọrụ dabere na enyemaka. Mana na omume ọ na - eme na gọọmentị na - ewepụ ego enyemaka. I nwere ike icheta ọnọdụ gọọmenti na-ebelata. Enwekwara nchebe iwu megide mkpebi iwepu ya. Site na ịjụ ịkwụsị ego enyemaka, ịnwere ike, n'ọnọdụ ụfọdụ, hụ na enyere ikike gị na enyemaka ahụ aka. Na-enwe obi abụọ ma ọ bụrụ na ejirila iwu wepu ego enyemaka gị ka ị nwere ajụjụ ndị ọzọ gbasara enyemaka gọọmentị? Mgbe ahụ nweere onwe gị ịkpọtụrụ ndị ọka iwu nhazi nke Law & More. Obi ga-adị anyị ụtọ inye gị ndụmọdụ ajụjụ gị gbasara enyemaka enyemaka gọọmentị.
Nlekọta nlekọta Nchịkwa You nwere ike ịmekọrịta gọọmentị mgbe emebiri iwu na mpaghara gị na gọọmentị na-arịọ gị ka itinye aka ma ọ bụ mgbe, dịka ọmụmaatụ, gọọmentị ga-abịa iji chọpụta ma ị rubeere ọnọdụ ikike ma ọ bụ ọnọdụ ndị ọzọ etinyere. A na-akpọ nke a ndị mmanye ọchịchị. Gọọmentị nwere ike itinye ndị nlekọta maka ebumnuche a. Ndị nlekọta nwere ike ịnweta ụlọ ọrụ ọ bụla ma nye ha ohere ka ha rịọ ozi niile dị mkpa ma nyochaa ma were nlekọta ahụ. Nke a anaghị achọ ka enwere nnukwu enyo na iwu emebila iwu. Ọ bụrụ na ikwenyeghị na nke a, ị ga-ata gị ahụhụ. Ọ bụrụ na gọọmentị na-ekwupụta na ịda iwu dara, a ga-enye gị ohere ịmeghachi omume na ndị mmanye iwu ọ bụla. Nke a nwere ike ịbụ, dịka ọmụmaatụ, iwu n'okpuru ịkwụ ụgwọ ntaramahụhụ, iwu n'okpuru ntaramahụhụ nhazi ma ọ bụ mma nhazi. Ikike nwekwara ike napụrụ na ndị mmanye iwu na nzube. Iwu n'okpuru ịkwụ ụgwọ ntaramahụhụ pụtara na gọọmentị chọrọ ịmanye gị ịme ma ọ bụ ịkwụsị ịme ihe ọ bụla, n'ụdị a ị ga-akwụ ụgwọ ego ma ọ bụrụ na ị kwadoghị. Iwu ahụ n'okpuru ntaramahụhụ nchịkwa na-agabigakwa karịa nke ahụ. Site na ndutịm ndutịm, gọọmentị na-etinye ego na mmefu nke enyemaka ahụ na-esote n'aka gị n'aka. Dị ka ihe atụ, nke a nwere ike ịdị otú a, ma a bịa ịkwatu ụlọ iwu na-akwadoghị, ihicha ihe ndị mebiri ma ọ bụ imechi azụmahịa n’enweghị ikike. Ọzọkwa, n'ọnọdụ ụfọdụ gọọmentị nwere ike ịhọrọ itinye iwu na iwu site na iwu nchịkwa kama iwu mpụ. Ihe atụ nke a bụ mma nhazi. Iwu nchịkwa nwere ike ịdị elu. Y’oburu na enyere gi ikike inye ulo oru ma ikwenyeghi ya, inwere ike ighapu ulo ikpe. N'ihi ịda iwu ụfọdụ, gọọmentị nwere ike kpebie iwepụ ikike gị. Enwere ike itinye usoro a dị ka ntaramahụhụ, mana yana mmanye iwu iji gbochie ịme ihe ụfọdụ ịmegharị.
Ibu gọọmentị Mgbe ụfọdụ mkpebi ma ọ bụ omume nke gọọmentị nwere ike imebi ihe. N'ọnọdụ ụfọdụ, gọọmentị na-akwụ ụgwọ maka mmebi a ma ị nwere ike ịkwụ ụgwọ mmebi. E nwere ọtụtụ ụzọ gị, dị ka onye ọchụnta ego ma ọ bụ nke onwe gị, nwere ike ịrịọ mmebi sitere n'aka gọọmentị. Ọchịchị na-akwadoghị Ọ bụrụ na gọọmentị emebe iwu na-akwadoghị, ịnwere ike ịta gọọmentị ụta maka mmebi ọ bụla ị mebiri. Na omume, a na-akpọ iwu gọọmentị na-akwadoghị. Nke a bụ ikpe, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na gọọmentị mechie ụlọ ọrụ gị, onye ọka ikpe mechara kpebie na anaghị ekwe ka nke a mee. Dịka onye ọchụnta ego, ịnwere ike ịrịọ mmebi ego ị tufuru n'ihi mmechi nke gọọmentị na-adịru nwa oge. Mgbe ụfọdụ, gọọmentị nwere ike imebi ihe ma ọ bụrụ na gọọmentị emeela mkpebi ziri ezi. Nke a nwere ike ịbụ ikpe, dịka ọmụmaatụ, mgbe gọọmentị na-eme mgbanwe na atụmatụ mpaghara, nke ga-eme ka ụfọdụ ọrụ owuwu ụlọ nwee ike. Ngbanwe a nwere ike ime ka ị ghara inweta ego maka azụmaahịa gị ma ọ bụ belata uru ụlọ gị bara. N'ọnọdụ dị otú a, anyị na-ekwu maka ịkwụ ụgwọ maka mmebi atụmatụ ma ọ bụ nkwụghachi ụgwọ ọnwụ. Ndị ọka iwu nchịkwa anyị ga-enwe obi ụtọ inye gị ndụmọdụ maka ohere ịnweta ụgwọ dị iche iche n'ihi ọrụ gọọmentị. Mkpesa na ịrịọ arịrịọ Tupu mmegide megide mkpebi gọọmentị nwere ike ịnyefe ya n'ụlọ ikpe nchịkwa, a ga-ebu ụzọ duzie usoro mgbochi. Nke a pụtara na ị ga-egosi n ’akwụkwọ n’ime izu isii na ị kwenyeghị mkpebi ahụ yana ihe kpatara na ị kwenyeghi. A ga-emerịrị ihe mgbochi na mpempe akwụkwọ. Iji email ga-ekwe omume ma ọ bụrụ na gọọmentị gosipụtara nke a n'ụzọ doro anya. Ajụghị site na ekwentị anabataghị ya dịka nkwanye isi. Emechaa edebata ihe mgbochi, a na-enyekarị gị ohere iji ọnụ wee kọwaa ihe ị jụrụ. Ọ bụrụ na egosiputara na ị bụ onye ziri ezi ma kwupụta na esemokwu ahụ siri ike, mkpebi a ga-agbanwe na mkpebi ọzọ ga-anọchi ya. Ọ bụrụ na egosighi gị izi ezi, a ga-ekwupụta na ekwenyeghi na ntọala ya. Enwere ike ịgba akwụkwọ n'ụlọ ikpe na mkpegharị megide mkpebi a jụrụ. A ga-etinye akwụkwọ mkpesa na ederede n'ime oge izu isii. N'ọnọdụ ụfọdụ enwere ike ịme ya na ntanetị. Thelọ ikpe ahụ mechara ziga akwụkwọ ịrịọ arịrịọ n'ụlọ ọrụ gọọmentị yana arịrịọ iji zipu akwụkwọ niile metụtara ikpe ahụ wee zaghachi ya na nkwupụta nke ịgbachitere. A ntị ga-ekemende ndokwa. Lọ ikpe ga-ekpebi naanị mkpebi esemokwu banyere mgbochi. N’ihi ya, ọ bụrụ na ọkàikpe kwenyere n’ihe ị na-ekwu, ọ ga-akagbu naanị mkpebi ahụ i kwuru. Usoro ahụ agabigabeghị. Gọọmentị ga-ewepụta mkpebi ọhụrụ gbasara ihe a jụrụ. Oge imechi na iwu nchịkwa Mgbe gọọmentị kpebiri, ị nwere izu isii iji mee mkpesa ma ọ bụ mkpegharị. Ọ bụrụ n ’ị jụ n’oge, ohere gị ịme ihe megide mkpebi ga-agabiga. Ọ bụrụ na enweghị mmegide ma ọ bụ mkpegharị megide mkpebi, a ga-enye ya ikike iwu kwadoro. A na-ewere ya na iwu kwadoro ya, ma n'ihe gbasara okike ya na ọdịnaya ya. Oge njedebe maka ịnabata ma ọ bụ ịrịọ arịrịọ bụ n'ezie izu isii. Kwesịrị ịgba mbọ hụ na ị na-enyere onye ọka iwu aka n'oge. Ọ bụrụ na ị kwenyeghị na mkpebi, ị ga-etinyerịrị ọkwa nke ịjụ ma ọ bụ ịrịọ arịrịọ n'ime izu isii. Law & More nwere ike ịdụ gị ọdụ na usoro a. Ọrụ Anyị nwere ike ịgba akwụkwọ maka gị n'akụkụ niile nke iwu nchịkwa. Chee echiche, dịka ọmụmaatụ, nke itinye akwụkwọ mkpesa na ndị gọọmentị na-emegide iwu megide iwu nke ịkwụ ụgwọ ụgwọ ma ọ bụ ịgba akwụkwọ n'ihu ụlọ ikpe banyere enweghị ike inye ikike gburugburu ebe obibi maka ntụgharị nke ụlọ. Omume ndụmọdụ bụ akụkụ dị mkpa nke ọrụ anyị. N'ọtụtụ oge, iji ndụmọdụ kwesịrị ekwesị, ị nwere ike igbochi usoro ịgba akwụkwọ megide gọọmentị. Anyị nwere ike, n’ihe ndị ọzọ, nyere gị ndụmọdụ ma nyere gị aka: • itinye akwụkwọ maka enyemaka, • uru nke akwụsịla yana imegharị elele a; • itinye ego na nhazi; • ịjụ akwụkwọ anamachọihe gị maka inweta ikike gburugburu ebe obibi. ; • ịjụ ịjụ nweghachi ikike. Ceedga n'ihu na iwu nchịkwa na-abụkarị ezigbo ọrụ ọka iwu, ọ bụ ezie na enyemaka sitere n'aka onye ọka iwu na iwu anaghị adị mkpa. Na-ekwenyeghị na mkpebi gọọmentị nke nwere nsonaazụ dị ukwuu maka gị? Mgbe ahụ kpọtụrụ ndị ọka iwu nhazi nke Law & More ozugbo. Anyị nwere ike inyere gị aka!
Nọmba ederede: 27313406